Ahịa ekwentị na Ahịa Ahịa | Martech Zone
Mobile na mgbere ahịa na-aga n'ihu na-enye ụda ohere maka ndị na-ere ahịa iji melite uru ndị ahịa na-abawanye iguzosi ike n'ihe - n'ikpeazụ ịkwanye ahịa. Atụmatụ dị mfe dịka Ozi SMS nwere oke mmetụta nzaghachi. More elu ngwọta dị ka mobile ngwa nwere ike ịkwalite ahụmịhe ịzụ ahịa maka ndị ahịa.
Dynmark bụ UK dabeere na igwe ojii mobile ọgụgụ isi na izi ozi ụlọ ọrụ. Ha achikotala ihe omuma a nke n’enye otutu onu ogugu iji kwado oru ahia ahia gi site na teknụzụ mkpanaka.
Tags: dynmarkmobile ngwaahịa efumobile retail ngwaretailụlọ ọrụ ire ahịaahịa ahiaSMSozi ederede
Ihe kacha Email Marketing Cheatsheet
Ọkt 23, 2013 na 1:04 PM
Nnukwu infographic, ekele maka ịkekọrịta ya Douglas. M karịsịa uru bara uru na ndụmọdụ ikpeazụ ha na-enye ke utịt “smart retails will…”. Ekwentị mkpanaka doro anya na-enye ohere dị ukwuu n'ọdịnihu maka ndị nwere nkà iji jiri ya.